antso hivavaka | Jolay 2009 |
Ny fitiavana araka ny soratra masinaâ€¦
Les choses sont crÃ©Ã©es pour Ãªtre utilisÃ©es...
Efa zanak'Andriamanitra ve ianao...?
Efa zanak’Andriamanitra ve ianao ?
Ry Malagasy rahalahy sy anabavy ary Ray amandreny, aoka isika tsy ho diso hevitra ny amin’ny maha-kristiana na ny maha-zanak’Andriamanitra antsika. Tsy satria ny Dadabenao na ny razanao nilaza fa kristiana dia midika ho azy fa kristiana ary zanak’Andriamanitra koa ianao. Tsia, izao no lazain’ny soratra masina : « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. » Jaona 1 :12-13.
Tsy afaka hiteny velively isika hoe zanak’Andriamanitra raha tsy efa nandray an’i Jesoa Kristy ao anatintsika ; nandray Azy ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Izany indrindra no hevitry ny teny hoe « mino ». Ara-bakiteny, amin’ny teny malagasy, ny mino dia midika hoe misotro (Mino rano : fiteny avy any atsimo) na koa hoe mihinana (na fampinomana). Mampiditra ao am-bava na ao anaty no hevitr’izany; ary izany indrindra no tian’Andriamanitra ambara amintsika ny amin’ny atao hoe finoana. Raha mino an’Andriamanitra ianao dia mandray Azy ary mampiditra Azy ihany koa ao am-ponao. Marihiko fa tsy hoe “mametraka eo ambony loha, na mametraka Azy an-toeran-kafa” fa ao am-pontsika.
Kristiana = Kristy ao anatinao
Ny tenantsika : kristiana # Ny tenantsika irery ihany (Jesoa Kristy any ivelany any)
Izao no voalaza ao amin’ny Apokalypsy 3:20 « Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » Ny endriky ny sakafo tian’i Jesoa Kristy ambara dia ilay finoana izay tiany iarahana amintsika : mino an’Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny hiditra ao amintsika dia tsy hoe ny vatan-tenany hohitanao mandroso ao an-tranonao, fa ianao manaiky Azy honina ao am-ponao. Fa ny tsara ho marihina koa dia tsy fomban’Andriamanitra ny manao amboletra na manao an-terisetra hiditra ao amin’izany fonao izany, manome safidy malalaka ho an’ny tsirairay izy. Nefa kosa mampahafantatra ny lalàna tsara tokony izorany mba ahitanao ny tena fiainana.
Jaona 14:6 « Hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. »
Isika dia teraka tamin’ny ota, mpanota ary feno ota ao am-pontsika. Izany hoe ny tenantsika mihitsy no ota ary mila an’i Jesoa Kristy indrindra isika hanadio antsika ary hanafaka izany ota izany. Izany no antony nanolorany ny ainy hamonjy antsika ary nandatsahany ny ràny hanadiovana antsika raha mety isika. Jaona 3:16 « Fa izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana ny fiainana mandrakizay » Tadidio izany fa ho very ianao raha toa ka tsy mino Azy tsy mba hahita izany fiainana mandrakizay izany.
Rehefa nanontan’ny olona Petera, taorian’ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty ary niakarany velona tany an-danitra, hoe : “Inona no ataonay ?” dia izao no navaliny azy ireo : Mibebaha ianareo (Asa 2:38). Taoriana kely indray dia niteny izy hoe : Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo. (Asa 3:19). Ny fibebahana dia ny fanekenao fa meloka ianao, ota ianao, ka mahatsiaro marary any anatinao any, ary te hanala izany fanamelohana izay mangeja ao anatinao izany ianao. Isika isaky ny manota dia manombo indray an’i Jesoa kristy eo ambony hazo fijaliana nitondra ny otantsika rehetra; satria Izy no efa nanolo-tena ho faty hanadiovana izany helontsika izany. Maro ny mbola tsy mahalala na tsy mahatakatra ny hevitry ny tena atao hoe fibebahana. Ny ankamaroan’ny olona dia mihevitra fa rehefa miseho amin’ny endrika ety ivelany fa nisy fiovana teo amin’ny fiainana, na matetika ny ataony, dia ampy ilazana fa niova tanteraka tokoa ny tao anatiny tao. Tsy izany no tian’ny tenin’Andriamanitra ambara amintsika. Ny fahatsiarovana ny fijaliana anaty nanombo an’Andriamanitra mihoatra noho ny fahotana fotsiny no iaingan’ny fibebahana.
Jodasy Iskariota, taorian’ny namadihany ny Tompo, dia niloa-bava hoe : Nanota aho, satria, namadika ra marina. Fa hoy ireo : Ahoanay izany? fa asa anao. (Matio 27 :4). Ny famborahany izany teny izany dia noheveriny fa hanala ny fiampangana azy sy ny fitsaran’Adriamanitra azy rahatrizay. Ny vokatry ny asany no nameno tahotra tao am-pony fa tsy naneho nenina na kely akory aza izy tamin’ny namadihany ny zanak’Andriamanitra.
Mibebaka = miaiky tongotra aman-tànana ny fahotana, ny maha nofo-ota, ny heloka mampisaraka amin’Andriamanitra ary te-hiala tanteraka amin’izany rehetra izany.
Tadidio fa tsy ampy ny fiaikena fotsiny toy ny nataon’i Jodasy fa ny fanapahan-kevitra tsy hiverina amin’izany indrindra no tena zava-dehibe.
Hoy ny Tompo ao amin’ny Jaona 3:3 « Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. » Tsy maintsy mandalo fahateraham-baovao ny olona tsirairay avy vao afaka miteny hoe zanak’Andriamanitra. Ny fahateraham-baovao no manaisotra ny maha-nofo ota antsika ary ahafahantsika mivelona amin’ny fiainana tsy hain’izao tontolo izao. Io ilay voalaza tery ambony hoe “tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra”
Hoy Paoly ao amin’ny Galatiana 2:20 « Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazofijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. »
Tia antsika Andrimanitra satria Izy mihitsy no fitiavana. Te-hanavotra anao izy, nefa tsy an-tery no iantsoany anao fa am-pitiavana (fitiavana tsy mety levona). Fantatrao moa rehefa tia ny olona iray : mahafoy ny zavatra rehetra ho an’ny malalany, eny, hatramin’ny ainy. Koa maika fa Andriamanitra izay efa niantso anao hoe zanaka ary hampandova anao ny fanjakany rehetra rahatrizay. Tsy efa natolony ve ny tenany hovonoina noho ny fitiavana antsika tsy ho very. Efa nampanantena antsika Izy ny hanome izay rehetra irintsika (« Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. » Jaona 15:7). Moa misy porofom-pitiavana lehibe mihoatra izany ve ? Efa nasehony tamin’ny olona rehetra fa afaka mitsangana ny maty, dia izay maty ao amin’i Jesoa Kristy, ary ho velona any fiainana mandrakizay feno fifaliana sy voninahitra.
Izany fanazavàna fohifohy izany no tiako hozaraina amintsika eto. Raiso Jesoa Kristy fa efa te-honina ao amin’ny toerany ao am-ponao Izy. Iza no mbola asolonao Azy ka manery ny fonao ankehitriny ? Vohay izy fa efa miantso sy miandry ny fanapahan-kevitrao. Moa tsy tsapanao ve fa tsara indrindra izany miaina mandrakizay izany. Izao tontolo tsy hampanantena anao afatsy ny zavatra hita maso sy ny helo. Nefa rehefa hody vovoka ihany ianao ary tsy hahazaka na dia iray grama aza.
Ny Tompo irery ihany no efa nampanantena anao fa « handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa. » Jaona 14:2. « Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny Zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. » Matio 24:30
Ry Malagasy ! Raiso hanjaka eo amin’ny fiainanao Jesoa Kristy.
# Posted by fidinirina :: Finoana/Fivavahana:: Hametraka hevitra (4) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)